१५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिद्वारा बढी धूमपान , दैनिक रू. आठ करोड ४० लाख चुरोटका खिल्ली सेवन - Changupatra
तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ : गृहपृष्ठ › विशेष समाचार › १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिद्वारा बढी धूमपान , दैनिक रू. आठ करोड ४० लाख चुरोटका खिल्ली सेवन
3 weeks ago विशेष समाचार, समाचार, स्वास्थ्य0144 Views
भक्तपुर ,३ वैशाख ।नेपालमा १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले बढी धूमपान गरिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च र एक्सन नेपालद्वारा संयुक्तरूपमा शुक्रबार आयोजित ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा राजस्व वृद्धि र त्यसले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियाका अवसरमा त्यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएकाे हाे ।
तथ्याङ्कअनुसार १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले बढी धूमपान गर्छन् । १८ वर्षको उमेरमा ७८.८ प्रतिशत मानिसले धूमपान गर्छन् । चुरोट सेवनबाट २६ प्रकारका रोग निम्तिने विज्ञ चिकित्सकहरू बताउँछन् । चुरोट खाने हरेक पाँच जनामा एक जनामा क्यान्सर हुने र एउटा चुरोटले सेवन गर्ने व्यक्तिले २० जनालाई असर पुर्याउने गर्छ ।
अन्तरक्रियामा सहभागीले चुरोट, खैनी, सुर्ती र गुट्खा महँगो पर्ने र व्यक्तिको सेवनमा न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइएको छ । सहभागीले नेपालमा अहिले ३० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थमा राजस्व लिने गरिएकोमा ७० प्रतिशतसम्म पुऱ्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २८ प्रतिशत मानिसले धूमपान सेवन र दैनिक रू. आठ करोड ४० लाख चुरोटका खिल्ली सेवन गर्ने गरेको तथा वार्षिक रू. एक खर्ब ५३ अर्ब चुरोटको धुवाँमा खर्च हुने तथ्यांक रहेकाे जनाएको छ ।